Sujet Malagasy – série A, session 2008 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar - Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar
Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar Malagasy Série A Sujet Malagasy – série A, session 2008 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
Sujet Malagasy – série A, session 2008 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
1. Milaza tara-kevitra roa iombonan’ny asa soratr’I J.J. RABEARIVELO sy Samuel RATANY.
2. Hazavao ao anatin’ny andalana tsy mihoatra ny dimy fa mpiantoka ny velona ny razana.
Laza Adina II: Isafidianana ny A sy B
(…) – Hanao boto? Lehilahy efa mba teny amin’ny oniversite ve dia hanao boton’olona? Tsy rariny kosa izany!
- Fa angaha ny “maha-lehilahy lehibe teny amin’ny oniversite” ahy hahitako ny haniko isan’andro? Ary inona intsony moa izay rariny e? Ny miasa an-trano no mba haiku sy mora mety hahitana asa. Izay no anjara tratrako.
- Marina kanjo ny anao! Tena mampalahelo isika tanora ankehitriny. Mba nianatra ihany. Mba nandanian’ireo ray aman-drenintsika fatotra amam-pondrana ihany, … nefa dia izao: tsy an’asa. Fahiny, rehefa miteny I dada mialohan’ny taom-pianarana vaovao dia hoe: “Mianara tsara! Tsy manan-kolovana afa-tsy ny fahaizana ianareo. Mianara dia ho tafita!” Ankehitriny anefa, toa izay nianatra indray no rendrika (…)
- Izany anie no ilazako hoe: Tsy hitako intsony izay Rariny! Raha ny fikirizako fahiny ry Meja, tsy haniry izay ho mpiasa an-trano mihitsy aho! Tsy izany velively no tanjoko (…) saingy resy e! Ny hahitana izay sitrany ahay vaza-mihetsika sisa …
Iharilanto Patrick ANDRIAMANGATIANA (in VAKIVAKIM-PIAINANA, tak. 26-27)